October 2018 – MM File
ဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ ဇာတ်စင်ပေါ်ကနေ ကန်ချခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ကျော်ထူး
ကိုကျော်ထူးရဲ့ ရင်ဘတ်မှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့သေးတဲ့ ဇာတ်စင်ပေါ်ကနေ ကန်ချခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း သားဒီအငြိမ့်အဖွဲ့မှာ ကျတော်ပါလာတယ် သားကဘာလုပ်တာလဲတဲ့ ကန့်လန့်ကာဆွဲတာအမေဆိုရင် အမေခံစားရတော့မယ် အဲ့တော့အမေ့ကိုလိမ်တယ် သားအဲ့မှာ လူရွှင်တော်ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောလိုက်တယ် အဲ့လိုသုံးလိုက်တော့ အမေက ပွဲကြည့်ဖို့အတွက်ကို နေ့ခင်းထဲက […]
ချစ်သူမရှိခြင်းရဲ့ ထူးထူးခြားခြား အကျိုးကျေးဇူး (၅) ခု
သင်ဟာ ချစ်သူမရှိလို့ စိတ်ညစ်နေသူတစ်ယောက်လား။ ဒါမှမဟုတ် သူများစုံတွဲတွေ ပျော်ရွှင်နေကြတာကို ကြည့်ပြီး အားကျနေသူလား။ သင့်အနေနဲ့ တခြားသူတွေလို ချစ်သူမရှိလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့၊ စိတ်ညစ်နေတဲ့ အတွေးမျိုး ၀င်နေရင်တော့ အဲဒါကို အမြန်ဆုံး ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချစ်သူမရှိတဲ့ သူတွေမှာလည်း သူတို့ ရရှိနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ရှိနေတာကြောင့်ပါပဲ။ […]
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး တရားကျင့်ကြံသည့်ဂူမှာ အင်မတန်ကြမ်းတမ်းသော အနှောက်အယှက်များရှိကြောင်း ဆရာတော်မိန့်ကြား
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် နှစ်စဉ်ဝါတွင်းကာလများတွင် လူသူမနီးသည့်တောတောင်လျှိုမြောင်ကြားမှ သဘာဝလှိုင်ဂူကြီးများအတွင်းတွင် တစ်ပါးတည်းတရားဘာဝနာများစီဖြန်းကျင့်ကြံလေ့ရှိပါသည် ။ ဆရာတော်တရားကျင့်ကြံသည့်ဂူများသည်တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ် နေရာဒေသမတူဘဲ ဆရာတော်၏စိတ်အာရုံအရရွေးချယ်သောဂူများမှာသာတရားကျင့်ကြံလေ့ရှိပါသည် ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်ခရိုင်မှ ၃ နာရီအကြာ ( မိုးရာသီ ) မောင်းနှင်ရသော မုန်းကျတ်ရှမ်းရွာအနီးမှ တောင်ခြေဂူထဲတွင်ဝါတွင်းကာလ၌ တရားကျင့်ကြံပွားများခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ […]
မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေနဲ. ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးများ
ပြည်တွင်းပြောင်းလဲလာသည့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကြီးနဲ့အတူ မြန်မာ့အမျိုးသမီးများရဲ. ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကလည်း များစွာပြောင်းလဲလာတာတွေ.ရပါတယ်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာ အကောင်းဘက်သို့ပြောင်းလဲခြင်းတွေရှိသလို ဆိုးရွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလဲပြောင်းလဲလာကြတာတွေ.ရပါတယ်။
ပိုက်ဆံ ချေးသူရော ဆပ်သူပါအဆင်ပြေစေမယ့် မဖြစ်မနေ အထူးလေ့လာထားသောနည်းလမ်းများ
zaw gyi version ______________ ကိုယ်အနားမှာ ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ အားလုံးအဆင်ပြေစေချင်တယ် ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ ချမ်းသာရင် သူငယ်ချင်းတွေ ချမ်းသာရင် ပိုပီတိဖြစ်တယ် ။ ကောင်းမွေးဆိုးမွေး ခံယူဖို့ပါ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ ချမ်းသာမှမဟုတ်ဖူး ဆင်းရဲလဲ မိတ်ဆွေပါဘဲဗျာ ကူညီပါတယ် ကတိတော့ တည်ပါ ။ […]
တရုတ်ပြက္ခဒိန် အရသားလေး တစ်နှစ်ပြည့်သွားပါပြီလို. ဆိုတဲ့ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်း
အ သံဝဲ ဝဲလေး နဲ့ ချစ်စရာကောင်း တဲ့ မင်း သမီးချောလေး သဉ္ဖာနွယ်ဝင်း ကို ပ ရိသတ်တွေက ချစ်ခင်အားပေးကြပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအယာလေးနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်းက အခုချိန်မှာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ မလုပ်ကိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်တွေက သဉ္ဖာနွယ်ဝင်းကို […]
ရာဇဝတ်မူ လုံးဝမရှိတဲ့ မြန်​မာနိုင်​ငံအတွင်းက ရွာငယ်လေးအကြောင်း
လူတိုင်း ခရီးသွားကြပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီ​နေရာကို​တော့ ​ရောက်​ဖူးသူ နည်းကြမှာပါ။ မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ ရာဇဝတ်​မှု မရှိ / ရပ်​ကွက်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေမှုး မရှိ၊ တည်​ငြိမ်​​အေးချမ်းတဲ့ ရွာလေးတစ်​ရွာ ရှိတယ်​ဆိုရင်​ အံဩမိကြမှာပါ။ ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ အချက်​​တွေက အိမ်​တိုင်းမှာ ခြံစည်းရိုး မရှိ, မခတ်​ထားတာပါပဲ။ သူခိုး/ဓားပြလည်း […]
သာမန်မဟုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေရတဲ့ သူတို့ရဲ့အခက်အခဲများ
Bright Side သင်နေ့တိုင်းသွားနေတဲ့ အလုပ်ကို သိပ်ပင်ပန်းလွန်းလှပြီ ထင်နေပါသလား။ စားဝတ်နေရေးအတွက် နေ့တိုင်းလှုပ်ရှားနေရတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ငန်းတွေကို ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ သစ်ရွက်ခြောက်တွေ တံမြက်စည်းလှည်းအပြီး လေတိုက်လိုက်တော့ အကုန်လုံးပြန်လွင့်ကုန်တဲ့အခါ … © Matroshka / pikabu မိဘတွေကို လိမ်ပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ် … © zaweera1 / reddit နားကြပ်ကြိုးလေး […]
zawgyi version _____________ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အကြောက်တရားတစ်ခုခုတော့ ရှိကြပါတယ်။ ဘာဆိုဘာမှ မကြောက်တတ်သူတွေလည်း ရှိမှာဖြစ်ပေမယ့် ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။ ကိုယ်ဟာ အန္တရာယ်ထဲရောက်နေပြီ၊ ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်ခံနေရပြီလို့ တွေးတောလိုက်တာနဲ့ ကြောက်စိတ်ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။ ကြောက်စိတ်ဟာ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀တုန်းက ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေအပေါ်မှာလည်း အခြေခံပါတယ်။ လူ့စိတ်ဟာ ဆန်းကြယ်တာကြောင့် စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ကြတဲ့ ကြောက်စိတ်တွေဟာလည်း ဆန်းကြယ်တာကို အောက်မှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ သိရပါလိမ့်မယ်။ တိရစ္ဆာန်ကြောက်ရောဂါ […]
အပြင်မှာ အရပ်ပုကြတဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြားသူ အနုပညာရှင်များ
ကိုယ်နှစ်သက်အားပေးတဲ့ အနုပညာရှင် အကျော်အမော်တွေဟာ ပြင်ပလောကမှာ အရပ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ အရပ်ပုတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကို အရပ်ရှည်သယောင်ထင်ရအောင် အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်တာ ရှိပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသားတော်တော်များများတောင် ရိုက်ကွင်းထဲမှာ ခုံခုပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့နဲ့ ခုံမြင့်ဖိနပ်ကြီးတွေ စီးပြီး သရုပ်ဆောင်ဖို့ကို မရှက်ကြပါဘူး။ ရိုက်ကွင်းရဲ့ ရိုက်ကူးရေး […]